Israa'iil oo hakisay dib udajin ay u samayn lahayd qaxooti - BBC News Somali
Israa'iil oo hakisay dib udajin ay u samayn lahayd qaxooti
Muhaajiriinta oo dibedbaxaya
Ra'iisalwasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa hakiyay heshiis uu la galay Qaramada Midobay kaas oo ahaa in dib u dajin loo sameeyo kumanaan muhaajiriin Afrikaan ah.
Saacado un ka dib markii lagu dhawaaqay heshiiska ayuu Netanyahu hadana hakad galiyay isagoo sheegay in uu la hadli doono dadka deggan koonfurta Tel Aviv halkaaso oo ay ku noolyihiin soo galooti badan.
Qorshaha dib u dejinta waxaa ka soo horjeestay qaar ka mid ah xisbigiisa.
Heshiiskan ayaa waxaa loogu talagalay in 16,250 qof oo muhaajiriin afrikaan ah kuwaas oo si sharci darro ah ku soo galay wadanka dib u dajin laga siiyo wadamada ree galbeedka kuwaasi oo ay ka mid yihiin Jarmalka, Talyaaniga iyo Kanada.
Qofkastaa oo dib dajin laga siinayo wadamadaasi ayaa Israel si ku meel gaar ah usii dagganaan doono.
Qorshaha lagu doonayay in dadkani muhaajiriinta ah dib loogu celiyo Afrika gaar ahaan Uganda iyo Ruwanda ayaa waxaa joojisay Maxkamadda ugu sareysa Israa'iil musaafurinta dadkani oo dhici lahayd Axaddii aanu soo dhaafnay.
Saqdii dhexe ee xalay warbixin la soo dhigay barta Facebook ayaa lagu sheegay in la hakiyay heshiiskii qaramada midobay iyo Israel ay wada galeen. Mr Netanyahu ayaa sababta loo hakiyayna ku sheegay in ay Ruwanda ka baxday heshiiska.
Waxaa uu sheegay in uu dib uga fakarayo heshiiskaasi kadib markii uu dhageeysatay aragtida dadka ree Israel.
Netanyahu ayaa cambaarayn kala kulmay dadka ka soo horjeeda muhaajiriinta deggan koonfurta Tel Aviv iyo siyaasiyiin ka tirsaan dowladiisa.
Diyaaradaha Israa'iil oo "duqeeyay Suuriya"
Wasiirka cadaaladda Ayelet Shaked ayaa ka mid ahaa wasiirada sheegaya in aysan waxba ka ogayn heshiiska oo ay un maqleen markii lagu dhawaaqay.
Hay'adda qaramada midobay u qaabilsan qaxootiga ayaa BBC-da u sheegtay in aysan Israel la soo xiriirin markii ay hakineeysay heshiiska.
Halkeebay markii hore ka yimaadeen muhaajiriintan?
Inta badan 42,000 ee muhaajiriinta afrikaanka ahi ayaa ka yimaaday dalka Eritrea oo uu ka taliyo hal xisbi oo kaliya waxaana hogaamiyeyaashodu lagu eedeeyay in ay geeysteen tacaddiyo lid ku ah xuquuda aadanaha.
Waxa ay sheegeen in ay ka soo carareen amini darro ka jirta wadnakooda balse Israel ayaa aaminsan in inta badan muhaajiriinta ay yihiin dad dhaqale raadis ah.
Dadkaan badanood waxa ay ka soo galeen xuduudda Israel ay la wadaagto masar sanado ka hor inta aan la dhisin darbiga sohdinta labada dal.